Ndị Eze nke Mbụ 18:1-46
Ịlaịja gara hụ Obedaya na Ehab (1-18)
Ịlaịja na ndị amụma Bel gara n’ugwu Kamel (19-40)
“Olee mgbe unu ga-akwụsị ịkwụ ụzọ ebe abụọ?” (21)
Afọ atọ na ọkara mmiri na-ezoghị gafere (41-46)
18 Ka oge na-aga, n’afọ nke atọ+ mmiri na-ezobeghị, Jehova gwara Ịlaịja, sị: “Gaa hụ Ehab, m ga-emekwa ka mmiri zoo.”+ 2 N’ihi ya, Ịlaịja gawara ịhụ Ehab mgbe ezigbo ụnwụ ka dị+ na Sameria. 3 Ma, Ehab kpọrọ Obedaya, onye na-elekọta ezinụlọ ya, ka ọ bịa. (Obedaya na-atụ nnọọ egwu Jehova. 4 Mgbe Jezibel+ nọ na-egbu ndị amụma Jehova, Obedaya kpọọrọ otu narị (100) ndị amụma zoo ha n’ọgba, mmadụ iri ise mmadụ iri ise, na-enyekwa ha nri na mmiri.) 5 Ehab wee gwa Obedaya, sị: “Gaa gburugburu ala a, n’ebe niile e nwere isi iyi nakwa na ndagwurugwu niile, ka anyị lee ma ànyị ga-ahụ ahịhịa ndụ ịnyịnya na jakị anyị ga na-ata, ka anụmanụ anyị niile ghara ịnwụcha.” 6 Ha abụọ kere ebe ndị ha ga-aga n’ala ahụ eke, Ehab esi otu ụzọ gawa naanị ya, Obedaya esi ụzọ ọzọ gawa naanị ya. 7 Ka Obedaya nọ na-aga, Ịlaịja gara ka ya na ya hụ. Ozugbo Obedaya hụrụ ya, ọ matara ya, wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala, sị: “Onyenwe m Ịlaịja, ọ̀ bụ gị bụ onye a?”+ 8 Ya asị ya: “Ọ bụ m. Gaa gwa onyenwe gị na Ịlaịja nọ ebe a.” 9 Ma ọ sịrị: “Olee ihe m mere nke mere ị ga-eji nyefee ohu gị n’aka Ehab ka o gbuo m? 10 Eji m Jehova, bụ́ Chineke gị, onye dị ndụ, na-aṅụ iyi na o nweghị mba ma ọ bụ alaeze onyenwe m na-ezibeghị ozi ka a gaa chọọ gị. Ọ na-abụ, mba ndị ahụ na alaeze ndị ahụ sị na ị nọghị n’obodo ha, ya agwa ha ka ha ṅụọrọ ya iyi na ha ahụghị gị n’eziokwu.+ 11 Ugbu a, ị na-asị m gaa gwa onyenwe m na Ịlaịja nọ ebe a. 12 M hapụ gị ugbu a gawa, mmụọ Jehova ga-ebuga gị+ ebe m na-agaghị ama. Ọ bụrụkwa na mụ agaa kọọrọ Ehab sị lekwa ebe ị nọ, ya abịa, ọ hụghị gị, ọ ga-egbu m. Ma, mụnwa, bụ́ ohu gị, si na nwata tụwa egwu Jehova. 13 Onyenwe m, ọ̀ bụ na a gwabeghị gị ihe m mere mgbe Jezibel nọ na-egbu ndị amụma Jehova, na m zoro otu narị ndị amụma Jehova n’ọgba, mmadụ iri ise mmadụ iri ise, na-enyekwa ha nri na mmiri?+ 14 Ọ bụrụkwa na mụ agaa ugbu a gwa onyenwe m na Ịlaịja nọ ebe a otú i kwuru, e mechaa, ya egbuo m.” 15 Ma, Ịlaịja sịrị ya: “Eji m Jehova nke ụsụụ ndị agha, onye dị ndụ na onye m na-efe,* na-aṅụ iyi na mụ na ya ga-ahụ taa.” 16 Obedaya gawaziri gaa gwa Ehab, Ehab agawa ịhụ Ịlaịja. 17 Ozugbo Ehab hụrụ Ịlaịja, Ehab sịrị ya: “Ọ̀ bụ gị bụ onye a, onye tinyere ndị Izrel ná nnukwu nsogbu?” 18 Ịlaịja asị ya: “Etinyeghị m ndị Izrel ná nsogbu, kama ọ bụ gị na ezinụlọ nna gị tinyere ndị Izrel ná nsogbu, n’ihi na unu kwụsịrị idebe iwu Jehova fewe Bel.+ 19 Ugbu a, kpọkọtara m ndị Izrel niile n’Ugwu Kamel,+ ha na narị ndị amụma Bel anọ na iri ise (450) nakwa narị ndị amụma anọ (400) na-efe ogwe osisi arụsị,*+ ndị na-eri ihe na tebụl Jezibel.” 20 Ehab wee zie ozi a gaa gwa ndị Izrel niile na ndị amụma ahụ, ha ezukọọ n’Ugwu Kamel. 21 Ịlaịja bịakwuteziri ha niile, sị ha: “Olee mgbe unu ga-akwụsị ịkwụ ụzọ ebe abụọ?+ Ọ bụrụ na ọ bụ Jehova bụ ezi Chineke, sowenụ ya,+ Ma ọ bụrụ na ọ bụ Bel, sowenụ ya.” Ma ha ekwughị ihe ọ bụla. 22 Ịlaịja asị ha: “Naanị m bụ onye amụma Jehova fọrọnụ,+ ma ndị amụma Bel dị narị ụmụ nwoke anọ na iri ise (450). 23 Ka ha kpụnye anyị oké ehi abụọ, ka ha họrọkwa otu oké ehi ma bọkasịa ya, dokwasịkwa ya n’elu nkụ, ma ha agaghị etinye ya ọkụ. M ga-abọkasị oké ehi nke ọzọ, dokwasịkwa ya n’elu nkụ, ma agaghị m etinye ya ọkụ. 24 Unu ga-akpọkukwa aha chi unu,+ ma m ga-akpọku aha Jehova. Ihe a ga-eji ama Chi nke bụ́ ezi Chineke bụ nke ji ọkụ za.”+ Ha niile asị: “Ihe i kwuru dị mma.” 25 Ịlaịja agwazie ndị amụma Bel, sị: “Burunụ m ụzọ họrọ otu oké ehi bọkasịa, n’ihi na unu dị ọtụtụ. Kpọkuokwanụ chi unu, ma unu etinyekwala anụ ahụ ọkụ.” 26 Ha wee kpụrụ oké ehi e nyere ha, bọkasịa ya, na-akpọku Bel si n’ụtụtụ ruo n’ehihie, na-asị: “Bel, za anyị!” Ma a nụghị olu ọ bụla, o nweghịkwa onye zara ha.+ Ha nọkwa na-awụgharị gburugburu ebe ịchụàjà ahụ ha rụrụ. 27 N’ehihie, Ịlaịja malitere ịkwa ha emo, sị: “Kpọkusienụ ya ike. Unu manụ na ọ bụ chi.+ Ọ ga-abụ na o nwere ihe na-echegbu ya, ma ọ bụkwanụ na ọ gara mposi.* O nwekwara ike ịbụ na ọ na-arahụ ụra, nke na e kwesịrị ịkpọte ya.” 28 Ha wee kpọkusiwe ya ike, jirikwa daga na ube na-amakasị onwe ha ahụ́, otú ha na-eme, ruo mgbe ọbara zuru ha ahụ́. 29 Ha nọ na-emegheri emegheri* ehihie niile agaa, megidekwa otú ahụ ruo oge e ji achụ àjà ọka ná mgbede. Ma, a nụghị olu ọ bụla. O nweghị onye zara ha, o nweghịkwa ihe ọ bụla merenụ.+ 30 N’ikpeazụ, Ịlaịja gwara ndị ahụ niile, sị: “Bịanụ.” Ha niile abịakwute ya, ya arụzie ebe ịchụàjà Jehova nke a kwaturu akwatu.+ 31 O butekwara nkume iri na abụọ ebe ahụ, nke bụ́kwanụ ole ebo ụmụ Jekọb dị. Jekọb a ka Jehova gwara, sị: “Aha gị ga-abụ Izrel.”+ 32 Ịlaịja jikwa nkume ndị ahụ rụọ ebe ịchụàjà+ n’aha Jehova. O gwukwara olulu gburugburu ebe ịchụàjà ahụ. Ebe o gwuru olulu ahụ hà ka ebe a ghara mkpụrụ ruru sia* abụọ. 33 Mgbe o gwuchara olulu ahụ, ọ haziri nkụ n’usoro, bọkasịa oké ehi ahụ, ma dokwasị ya n’elu nkụ ahụ.+ O kwuziri, sị: “Gbajuonụ nnukwu ite anọ mmiri ma wụọ ya n’elu anụ a e ji achụ àjà a na-esu ọkụ nakwa n’elu nkụ a.” 34 Ọ gwakwara ha sị: “Gbajuonụ ha, wụọ ya ọzọ,” ha emee ya, ya asịkwa ha ọzọ: “Gbajuonụ ha, wụọ ya nke ugboro atọ,” ha emeekwa ya nke ugboro atọ. 35 Mmiri ahụ juru gburugburu ebe ịchụàjà ahụ. Ịlaịja gbajukwara olulu ahụ mmiri. 36 Mgbe o ruru oge e ji achụ àjà ọka,+ Ịlaịja onye amụma gara ebe ịchụàjà ahụ nso, sị: “Jehova bụ́ Chineke Ebreham,+ Aịzik,+ na Izrel, biko, mee ka onye ọ bụla mata taa na ị bụ Chineke n’Izrel, na m bụ ohu gị, nakwa na ọ bụ gị gwara m mee ihe ndị a niile.+ 37 Jehova, biko za m. Biko za m, ka ndị a nwee ike mara na ọ bụ gị, Jehova, bụ ezi Chineke nakwa na ị chọrọ ka obi ha dịrịghachi n’ebe ị nọ.”+ 38 Jehova zitere ọkụ ozugbo ahụ, ya erepịa àjà ahụ a na-esu ọkụ,+ nkụ ndị ahụ, nkume ndị ahụ, na ájá ndị dị ebe ahụ. Ọ mịkọkwaara mmiri dị n’olulu ahụ.+ 39 Ozugbo ndị niile nọ ebe ahụ hụrụ ya, ha gburu ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala, sị: “Ọ bụ Jehova bụ ezi Chineke! Ọ bụ Jehova bụ ezi Chineke!” 40 Ịlaịja sịziri ha: “Jidenụ ndị amụma Bel! Unu ekwela ka otu n’ime ha gbapụ!” Ha jichikwara ha ozugbo, Ịlaịja akpụrụ ha gaa n’iyi* Kaịshọn,+ gbuo ha ebe ahụ.+ 41 Ịlaịja gwakwara Ehab, sị: “Lawa, gaa rie nri, ṅụọkwa mmanya, n’ihi na m na-anụ ụzụ ezigbo mmiri na-aga izo.”+ 42 Ehab lawara ka ọ gaa rie nri, ṅụọkwa mmanya. Ma Ịlaịja gbagooro n’ugwu Kamel hulata ala ma kpunye ihu n’agbata ikpere ya abụọ.+ 43 Ọ sịkwara onye na-ejere ya ozi: “Biko, gbagoo lee anya ná mpaghara oké osimiri.” Onye ahụ na-ejere ya ozi agbagoo lee anya ebe ahụ ma sị ya: “O nweghị ihe m na-ahụ.” Ma, Ịlaịja gwara ya ugboro asaa ka ọ gaghachi. 44 Mgbe ọ gara nke ugboro asaa, ọ sịrị: “E nwere obere ígwé ojii dị ka aka mmadụ nke si n’oké osimiri na-apụta.” Ịlaịja asị ya: “Gaa gwa Ehab, sị, ‘Kwadebe ụgbọ ịnyịnya gị, lawakwa ka nnukwu mmiri na-aga izo ghara igbochi gị ịla.’” 45 O teghị aka, eluigwe agbachie, ifufe efewe, nnukwu mmiri ezowekwa.+ Ma, Ehab gbaara ụgbọ ịnyịnya ya lawa Jezril.+ 46 Ma Jehova nyere Ịlaịja ike, ya ekee ájị̀ n’úkwù, buru Ehab ụzọ gbaruo Jezril.
^ O nwere ike ịbụ, “o nwere ebe ọ gara.”
^ Ma ọ bụ “na-eme ka ndị amụma.”
^ Sia bụ ihe e ji atụ̀ ihe. Otu sia bụ lita 7.33. Gụọ B14.